22/11/2014 21:30 -Sakafo ho an'ny zazakely
Sehatra iray anisany mila fitandremana eo fitaizana ny zazakely amam-bolana ny sakafo aroso azy noho izy mbola marefo indrindra ny taovam-pandevonan-kaniny hoy ny mpitsabo, na ireo Reny mitaiza aza dia mahatsiaro sy mahafantatra izany tsara hoan'ny zazany na dia vao voalohany mitaiza aza eo amin'ny fiainany....
21/10/2014 05:51 -MONY AMIN’NY TAREHY: IREO FITSABOANA NATORALY AFAKA ATAO
Ny hoditava mitera-menaka dia isehoan’ny mony matetika. Inona ireo fikarakarana azo atao ao an-trano hanamainana azy ireny faingana? Ary rehefa maina indray ka mamela tasy, inona no fomba hanadiovana ny hoditava ka hampiverina ny lokony? Ireto misy toro-hevitra entina hanampina anao....
12/09/2014 08:08 -FIKOJAKOJANA NY ATY
Taova mpanadio ary tena saro-pady ny aty. Rehefa tsy salama izy dia mety hitarika fikorontanana any @ taova hafa izany. Inona no afaka atao hikojana io taova io?...
18/07/2014 13:23 -MARO NY AZO AMPIASAINA NY RONONO
Mitsabo fivontosana, mampitony ny retsina sy ny sohika…Maro ny zava-tsoa entin’ny ronono ho an’ny vatantsika. Ireto misy fanomanana vitsivitsy afaka atao tsara ao an-trano....
18/06/2014 20:15 -HODITRA VAKIVAKY, INONA NO FITSABOANA TSOTRA AZO ATAO ?
Azo sorohana @ fampiasana menaka voatokana ho an’ny vatana ny vakivaky @ tànana na tongotra. Raha efa mihatra ny olana, ireto misy toro-hevitra tsotra entina hitsaboana izany.&nbsp;Fotoana mahavakivaky ny hodit...
13/05/2014 06:44 -MENAKA RAVITSARA, TENA ILAINA AMIN’NY RIRININA
Hiditra amin’ny vanim-potoana ririnina isika, mba hampiakatra ny hery fiarovana ao amin’ny vatana dia misy karazana menaka tokony ho fitahiry an-trano mandrakariva. Isan’ireny ny menaka azo avy amin’ny Ravitsara. Fantaro ireo soa entiny ho an’ny fahasalamantsika. Huile essentielle (HE) azo avy amin’ny Ravitsara no resahintsika eto. ...
31/03/2014 21:28 -Fahasimban’ny fahasalama ateraky ny fihinanana ny siramamy.
Ilain’ny vatana tokoa ny siramamy saingy misy voka-dratsy mety ateraky ny fihinanana azy....
18/03/2014 06:46 -Torohay samihafa mahasoa
Indreto misy toro hay samihafa notsongaina mety ahasoa sady ilainao amin’ny fiainana andavanandro: -Mamaofy tongolo tsy mitomany, fanalàna siligaoma amin’ny akanjo......
24/02/2014 19:14 -Mampidi-doza ny ody moka
Ny setroka entin’ny ody moka 1 dia mahery avo zato heny nohon’ny setroka sigara 100....
09/02/2014 19:07 - ATODY MBOLA TSARA SA TSIA?
Hainao ve ny fijerena hoe mbola tsara ny atody iray sa tsia....